* Light Of Myanmar *: ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဆိုရင် မေ့နိုင်ပါတယ်
Posted by * In Search of Truth * at 12:02 PM
pyi chit thar said...
ကျနော် တို့ စစ် တပ် ကြီး က ခင် ဗျား ကို သိ ပြီး သားပါ ၊
MYO THEIN HTUN ( Designer Artist )( Mr. Creator)
43-47, 43 rd Street
# 3F, Sunnyside
Home: ( 718 ) 786-6151
Cell : ( 917 ) 517-6241
ဟဲ ဟဲ ၊ မေတ္တာ တရား နဲံ့. လုပ် လိုက် တာ ဟဲ ဟဲ၊ မေတ္တာတရားနဲ့ ဆော်ပလေတီးလိုက်တာ၊ ဗုဒ္ဓသားစစ် သံဃာတော်တွေ နထ်ထံပြန်ကုန်ရော။ တချို့က လဲ ထောင် အကျဉ်းစခန်းတွေမှာ။
ဟဲ ဟဲ ၊ မေတ္တာ တရား နဲံ့. လုပ် လိုက် တာ တိုင်းပြည်ကြီးလဲ ဆင်းရဲတွင်းနက်ရော့။
ဟဲ ဟဲ ၊ မေတ္တာ တရား နဲံ့. လုပ် လိုက် တာ နိုင်ငံ့သယံဇာတတွေနဲ့ စိန်တွေသီးကုန်ရော့။
Anybody can buy the US Marine Corp clothings and batches freely here.
hey ko zaw myo,
I read the article of new york through your link. the article doesn't say the government was behind the 9/11. It just trying to say people should get on with it. Throughout the histroy there werealot of tragedies happened. it just say people should go on instead of mourning. I expect you should translate correctly if you want to reference something. it is not nice to manipulate the title. if you want to manipulate the information, don't be too obvious. just advice!
အဲလိုသာတွေးပါခင်ဗျာ။ အလိမ်ခံနေရတဲ့ ဘ၀ကနေ ဘယ်တော့မှ လွတ်မြောက်မှာမဟုတ်ပါ။ နအဖ သတင်းစာတွေပဲ သူတို့လိမ်ချင်တာကို တည့်တည့်ကြီးလိမ်ပါတယ်။ ဒီမိုကရေစီသတင်းဌာနတွေက လိမ်ရင် ပညာနဲ့လိမ်ပါတယ်။ အစ်ကိုနားလည်အောင် ပြောပြပါမယ်ခင်ဗျာ။ ဒီဆောင်းပါးကိုဖတ်ကြည့်ပါ( http://lightofmyanmar.blogspot.com/2007/08/bbc_13.html ) ။ BBC တည့်တည့်မလိမ်ဘူးဆိုတာ သိလာပါမယ်။
ဒီလိုပါပဲ။ NY Times မှာ 9/11 မှာ သေသွားတဲ့သူတွေကို မေ့ဖို့ပြောတယ်ထင်သလား? 9/11 သေသွားသူတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဘယ်သူမှ မပြောကျပါဘူး။ အမေရိကန်အစိုးရ လုပ်ကိုင်ချက်ကိုသာ အဓိက မီးမောင်းထိုးပြတဲ့အလုပ်ကို လုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ သွယ်ဝိုက်တဲ့နည်းနဲ့ အမေရိကန်အစိုးရကို မဝေဖန်နဲ့တော့လို့ ပြောထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီမှာ ပုလဲဆိပ်ကမ်းဗုံးကြဲတဲ့ကိစ္စ၊ JFK အသတ်ခံရတဲ့ကိတ်စနဲ့ Oklahoma ဗုံးကွဲတဲ့ကိစ္စတွေကို ထည့်ရေးထားပါတယ်။ အဲဒီကိစ္စတွေမှာ အားလုံးဟာ အမေရိကန်အစိုးရ နောက်ကွယ်ကနေ ယုံကြည်ကျပါတယ်။ အဲလို အမေရိကန်အစိုးရလုပ်တဲ့ ကိစ္စတွေကို မေ့နိုင်သလို 9/11 ကို အမေရိကန်အစိုးရလုပ်တယ်ထင်လဲ မေ့သင့်ပြီလို့ လူတွေကို စဉ်းစားလာအောင်လုပ်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုက်ဝါးလုပ်တာတမျိုးပါ။ ပုလဲဆိပ်ကမ်းကို ဂျပန်ဗုံကြဲတာ အမေရိကန်အစိုးရနဲ့ ဘာဆိုင်လို့လဲလို့ အတင်းဖင်ပိတ်မပြောနဲ့နော်။ အမေရိကန်အစိုးရ သူ့ရဲ့စစ်သားတွေကို ဘယ်လိုချကျွေးလဲသိရအောင် လေ့လာပါခင်ဗျာ။ သတင်းတွေနဲ့ သမိုင်းစာအုပ်တွေ ဖတ်တာများပြီး “အ” တဲ့သူ ဖြစ်နေမှာဆိုးလို့ပါ။
ကျနော်သိသလောက် Marine ဆိုတဲ့ တံဆိပ်နဲ့ အကျီဝယ်လို့မရပါ။ နာမည်စာတန်းလဲထိုးလို့မရပါခင်ဗျာ။ နောက်ပြီး သူ့နောက်ခံကိုကြည့်ရင် သဘောင်္ပေါ်မှာ ရိုက်ထားတာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ တချက်လောက်လေ့လာကြည့်ပါဦးခင်ဗျာ။
နိုင်ငံရေးနဲ့ ပတ်သက်ရင် ဒီမိုကရေစီလဲ သတ်ဖြတ်မှာပါခင်ဗျာ။ နိုင်ငံရေးသမားဆိုတာ လူ့ဘောင်အဖွဲ့အစည်းထဲမှာ အောက်တန်းအကျဆုံး လူတန်းစားဖြစ်ပါတယ်။ ဦးသန်းရွှေဟာ အောက်တန်းစားပါ၊ ဒေါ်ကော်ပီစုကြည်လည်း အောက်တန်းစားပါ။ ဒါပေမယ့် နအဖ ဘုန်းကြီးတွေကို သတ်တယ်ဆိုတာ ကျနော်လက်မခံဘူးဗျ။ ဗီဒီယိုထဲမှာကြည့်ရင် စစ်သားတွေနဲု့လုံထိမ်းတွေဟာ ဘုန်းကြီးတွေကို လူစုခွဲအောင် ပါးစပ်နဲ့ စည်းရုံးနေတာတွေ့ရပါတယ်။ နောက်ဆုံးမတတ်သာလို့ လူစုခွဲတော့လဲ ရှေ့ဆုံးက ဘုန်းကြီးတွေကို မရိုက်ပဲ အလယ်မှာ ရှိနေတဲ့ ဘုန်းကြီးတွေနဲ့ လူတွေကို ရိုက်တာ မြင်တွေ့ရပါတယ်။ အဲဒါဘာကြောင့်လဲ သိလား? ကတုံးစိမ်းတွေနဲ့ ဘုန်းကြီးတွေကို အကာအကွယ်ယူပြီး နိုင်ငံရေး လုပ်နေသူတွေကို ရွေးပြီး ရိုက်ပုံပေါ်ပါတယ်။ အဲဒီအတွက် ရဲနဲ့ စစ်သားတွေ လုပ်ရပ်ကို ကျနော် ဂုဏ်ယူပါတယ်။ တကယ့်သံဃာတော်အစစ်ကို မရိုက်မိအောင်ကြိုစားခဲ့ပုံပေါ်ပါတယ်။ ဘယ်ဗီဒီယိုမှ ဘုန်းကြီးတွေအသတ်ခံရတာ မတွေ့မိပါ။ တချက်လောက်မြင်ရင် သက်သေပြပါခင်ဗျာ။ DVB လုပ်တဲ့ ဘုန်းကြီး ဗီဒီယိုအတုပဲမြင်ရပါတယ်။
Oh, you can buy any US Army/ Navy/ Marine/ Air force/ Coast guard genuine surplus cloth here freely, for anywhere between $45 to $75, and any batch for $3 to $8 dollar. http://www.soldiercity.com/category-exec/category_id/472/last_category/49
You can even legally buy the genuine military issue 1911 ACP45 pistols etc too, as well as genuine military humvee jeep.
A lot of people buy and collect them as hobby, including some of my friends.
Blogger * In Search of Truth * said...
မေတ္တာပို့တဲ့ အလေ့အထဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာတစ်ခုတည်းမှာပဲ တွေ့ရပါတယ်။ သိပ္မံနယ်ပယ်မှာလဲ မတွေ့ရပါ။ မွတ်ဆလင် ၊ ခရစ်ယာန် နဲ့ ဟိန္ဒူတွေမှာ မေတ္တာပို့တဲ့ ဓလေ့ မရှိပါဘူး။ တခြားဘာသာတွေအမြင်မှာ မေတ္တာပို့တာတို့ သည်းခံတာတွေဟာ လောကထဲမှာ အသုံးမ၀င်ဘူးတဲ့။ အပြစ်ရှိသူကို ခွင့်လွှတ်တာထက် အပြစ်ပေးလိုက်တာ အကောင်းဆုံး ဖြစ်တယ်ဆိုပဲ။ ခွင့်လွှတ်လိုက်ရင် အပြစ်လုပ်သူတွေ ပိုများလာနိုင်တယ်လို့ ယူဆကျပါတယ်။ ပြောပုံကတော့ မှန်နေသလိုပဲ။ နောက်ပြီးမေတ္တာဟာ ရန်သူပေါ်မှာ အသုံးမ၀င်သလို သည်းခံတယ်ဆိုတာ စိတ်ပျော့ညံ့သူတွေ အတွက်လို့ စွပ်စွဲထားကျပါတယ်။
so foolish and funny guys. ha ha ha
if you don't know well about the other religion, please don't blame the other.Also,keep in your mind that I amabuddhist.